တရုတ်စံကား - ဝီကီပီးဒီးယား
တရုတ်စံကားပန်းပင်သည် 'အဲ့ပေါ့ဆီနေးစီအီး'(Apocynaceae)မျိုးရင်းတွင်ပါဝင်၍၊ ယင်းကို သိပ္ပံအမည်ဖြင့် 'ပလူမေးရိယာ အကျူတီဖိုးလိယား'(Plumeria acutifolia; ယခုအခါတွင် Plumeria rubra)ဟု ခေါ်သည်။ တရုတ်စံကားသည် မက္ကဆီကိုနှင့် ဂွါးတိမားလနိုင်ငံတို့၌ မူလ အားဖြင့်ပေါက်သော ပန်းပင်ဖြစ်၏။ ထိုဒေသတို့မှ အခြားနိုင်ငံ တို့သို ပျံ့နှံ့လာပြီးလျှင် အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့သို့ ရောက်ရှိ လာသည်ဟု ယူဆကြသည်
၂ ဝေါဟာရရင်းမြစ်နှင့် ဒေသအခေါ်များ
၃ ဒေသအလိုက် အသုံးပြုပုံ
တရုတ်စံကားပန်းပင်သည် အပင်ပုမျိုးဖြစ်သည်။ ပေ ၂ဝ ထက် မြင့်သော အပင်များကို တွေ့ရခဲသည်။ အများအားဖြင့် အစဉ်အပွင့်ပွင့်လျက်ရှိသော်လည်း၊ ဒီဇင်ဘာလမှ မိုးရာသီတိုင် အောင် အရွက်ကြွေတတ်သည်။ မကြီးသေးသော အပင်ငယ်တို့၌ သာ အရွက်မကြွေဘဲ စိုစိုပြည်ပြည်ရှိနေတတ်သောကြောင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ရှုချင်စဖွယ်ရှိ၏။ အခေါက်မှာ မွဲပြာရောင်ဖြစ် ၍ ချောမွတ်သော်လည်း၊ အပွေးတက်လျက်ရှိသည်။ အကိုင်းများသည် အဖျားဖက်တွင် ရှူးမသွားဘဲ၊ တုံးတိတိရှိတတ်၏။ အကိုင်းများတွင် နို့နှစ် ရောင် အစေးထွက်သည့် အခေါက် ရှိသည်။ အကိုင်းများ အောက်ခြေမှစ၍ ဖြာထွက်သည်။ အရွက်များ အကိုင်းထိပ်တွင် စု၍ ပတ်လည်ထွက်သည်။ အလျား ၁ ပေ ခန့် ထိရှည်သည်။ ရွက်ပြားချောသည်။ ရွက်ရင်းသိမ်၍ ရွက်ထိပ်တွင် ချွန်သည်။ ရွက်နားညီသည်။ ရွက်ညှာ ရှည်၍ အလယ်တွင် မြောင်း တိမ် သို့မဟုတ် အစင်းကြောင်း ပါသည်။ အပွင့်ပွင့်သည့် အခက်များပင်လျှင် အဖျားဖက်တွင် တုံးတိတိရှိသည်။ အသားများလျက် တုတ်၍ဆတ်သော ပွင့်တံတွင် အပွင့်များသည် အခိုင်လိုက်စု၍ ပွင့်တတ်သည်။
အပွင့်မှာ အဖြူရောင်ဖြစ်၍၊ ပန်းပွင့်၏ အလယ်တွင် အဝါရောင်ရှိသည်။ အချင်း ၂ လက်မ ခန့် ရှိသည်။ ပွင့်ချပ် ၅ ခုပါရှိသည်။ အနံ့ မွှေးကြိုင် သည်။ အလယ် တွင် အဝါနုရောင် ၊ အစိမ်းရောင် ၊ ပန်းရောင် ၊ အမွေးနု ကလေးများရှိသည်။ ကဆုန်လ၊ နယုန်လ များတွင် ပွင့်သည်။ ပွင့်ချပ်အောက်ခံတွင် ပန်းရောင်ထနေသည်ကို တခါတရံတွေ့ရတတ်သည်။ ပွင့်ချပ်များသည် အောက်ခြေတွင် တချပ်နှင့်တချပ် ထပ်လျက်ရှိ၍ ဝက်အူလိမ်သကဲ့သို့ တစ်ဘက်သို့လိမ်လျက်ရှိ၏။ ဝတ်ဆံဖိုများကိုမူ မမြင်နိုင်ချေ။ အချို့အပင်တွင် အနီရောင်ဖက်သို့လုနေသော လိမ္မော်ရောင်အပွင့်များ ပွင့်တတ်သည်။ တရုတ်စံကားပန်းတွင် အလွန် မွှေးကြိုင်သော အနံ့ရှိသည်။ အသီးမှာ ဦးချိုပုံသဏ္ဍန်ရှိသော သီးတောင့်ဖြစ်သည်။ အလျား ၈ လက်မရှိသည်။ နှစ်ခုတွဲ သီးသည်။ တွဲလောင်းကျ နေသော အညှာတွင် အတွဲလိုက် သို့မဟုတ် အစုံလိုက်အသီးသီးသည်။ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်း တွင် သီးသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် တွေ့ရသော သီးတောင့်များ၌ အစေ့ကိုမတွေ့ရချေ။ မြန်မာနိုင်ငံ၌လည်း ယင်းအစေ့ကိုတွေ့ရခဲသည်။ တစ်ပေအထိရှည်သော အရွက်များသည် အကိုင်း၏ အစွန်းပတ်လည်တွင် အပြည့်ပေါက်တတ်သည်။ အရွက်မှာ ချေမွှတ်၍ အနံကျဉ်းသည်။ အရွက်များသည် ရွက်ဖျားဖက်ထက် ရွက်တံဖက်သို့ ပိုမို၍ရှူး၏။ ရွက်လယ်ကြောမှ ရွက်ကြောပြိုင်တို့သည် အလျားလိုက် ဖြာထွက်လျက်ရှိသည်။
တရုတ်စံကားဟု ခေါ်ခြင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံ၌ မူလပေါက်ရောက်သော အပင်ဟု ယူဆခြင်း ခေါ်ဟန်လက္ခဏာရှိသည်။ ဟိန္ဒူဘာသာစကားအရ 'ဂူလချင်း' ဟုခေါ်သည်၊ ဂူလချင်းဟူသော အဓိပ္ပာယ်မှာ 'တရုတ်ပြည်မှ ပန်း'ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ မြန်မာတို့က တရုတ်စံကားဟု ခေါ်ခြင်းသည် ဟိန္ဒူတို့က ဂူလချင်းဟုခေါ်ဝေါ်သော သဘော သွားအတိုင်းပင် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆဖွယ်ရှိသည်။
တရုတ်စံကားပန်းပင်သည် ဆေးဖက်ဝင်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ အပင်မှရသည့် နို့ရည်နှင့်တူသောအစေးကို ရူမက်တစ်ဇင် ရောဂါပျောက်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင် စန္ဒကူးဆီ၊ ပရုတ်တို့နှင့် ပေါင်း၍ ယားနာပျောက်ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ တရုတ်စံကားပန်းပင်အခေါက်ကို နိုင်ငံအသီးသီးတွင် အမျိုးမျိုး အသုံးချကြသည်။ အခေါက်ကို အဖျားဖြတ်ဆေး၊ အနာပျောက်ဆေးနှင့် ဝမ်းနုတ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အရွက်ကို မီးကင်ပြီးလျှင် ဖောရောင်နေသောနေရာတွင် အုံပေးပါက ဖောရောင်ခြင်း ပျောက်ကင်းနိုင်သည်ဟု ဆို၏။ အဖူးကို ကွမ်းရွက် နှင့်ရော၍ အဖျားဖြတ်ဆေးအဖြစ်လည်း အသုံးပြုတတ်ကြသည်။
မြန်မာဆေးကျမ်းများ အလိုအရ တရုတ်စံကားသည် စပ်၊ ခါး ၊ ဖန်သော အရသာ ရှိ၍ ပူသော သတ္တိ ရှိ၏။ ဆီး ၊ ဝမ်း ကို ရွှင် စေသည်။ သလိပ် လေကို ကြေစေသည်။ နူနာ ၊ အနာပေါက် ၊ ဝမ်းဗိုက် ရောဂါ တို့ကို ပျောက်ကင်း စေနိုင်သည်။ အသုံးပြုပုံမှာ တရုတ်စံကားပင်၏ အခေါက်နှင့် အကိုင်းမှ ထွက်သော နို့နှစ် ရောင်အစေးကို ဝမ်းနုတ်ဆေး အဖြစ်သုံးသည်။ တရုတ်စံကားပင်မှ ထွက်သော နို့နှစ် ရောင်အစေးသည် ဝမ်းဗိုက်ရောင်ရောဂါ ၊ ဝမ်းဗိုက်ထိုးအောင့်ရောဂါကို ပျောက်ကင်း စေ၏။ တရုတ်စံကားရွက်ကို စားခြင်း ဖြင့် လည်းကောင်း ၊ အပွင့် ကို ပြုတ်တို့ ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ၊ မန်ကျည်းရည်နှင့် ပြုတ်၍ သနပ်လက်သုပ် လုပ်စားခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ဆီးဝမ်းကို ရွှင်စေ၍ သလိပ်လေကို ကြေစေသည်။
↑ Genus: Champa L.။ Germplasm Resources Information Network။ United States Department of Agriculture (2003-03-14)။ 24 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7November 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ World Checklist of Selected Plant Families။
↑ Govaerts, R., Goyder, D. & Leeuwenberg, A. (2019). World Checklist of Apocynaceae. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://wcsp.science.kew.org/ Retrieved 17 December 2019
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တရုတ်စံကား&oldid=728165" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၃၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။